हाम्रो पक्षमा जनलहर देखेर ओली समूहका मान्छेहरू मुर्छित भएका छन्: माधव नेपाल - Sutra News
शनिवार, माघ ३ गते २०७७
# सुपर प्लस साइज मोडल २०२१
हाम्रो पक्षमा जनलहर देखेर ओली समूहका मान्छेहरू मुर्छित भएका छन्: माधव नेपाल
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो समूहको जनलहर देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मानिसहरू मुर्छित भएको बताएका छन् ।
मंगलबार पोखरामा भएको भेलालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली समूहमाथि बुधबार नेकपा काठमाडौंले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपाललले साे कुरा बताएका हुन् ।
नेपालले भने, ‘ओली गुटका मानिसहरुले २/३ सय होला भनेको ठाउँमा २ हजार पो रहिएछ । विशाल उपस्थिति भयो, सम्भवत ओली गुटका मान्छेहरु मुर्छित भएका छन् कि पत्तालगाउनु होला ? कोही अस्पतालमा भर्ना हुन जानुभयो कि त्यो पनि पत्ता लगाउनुहोला ।’
अध्यक्ष नेपालले पूर्वएमालेमा सबैभन्दा कमजोर ठानिएको गण्डकी प्रदेशमा शानदार रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको दाबी गरे ।
उनले आफूहरुले देशैभर जनताबाट अपार समर्थन पाएको पनि दाबी गरे । ‘जहाँ गयो त्यही अपार समर्थन पाइन्छ’, उनले भने, ‘जनता, कार्यकर्ता, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, वौद्धिक र प्रवुद्ध समाजका तर्फबाट सहयोग पाएका छौँ ।’
त्यसैगरी अध्यक्ष नेपालले ओलीको पार्टी सडकको धुलो भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीले अहिले केन्द्रीय सदस्यका लागि टिकट बाँडिरहेको पनि नेपालले बताए ।
उनले भने, ‘उहाँले केन्द्रीय सदस्य बन्न आऊ भनेर टिकट बाड्नुभएको छ । त्यो सडकछाप पार्टीमा को–को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ । उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरुको संख्या बढ्दै छ । त्यो पार्टी सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ ।’
ओली पार्टी सिस्टममा भन्दा पनि गुटका आधारमा चल्ने व्यक्ति भएको नेपालको भनाइ छ । पार्टीले २०५० सालदेखि नै ओलीको प्रवृति झेल्दै आएको उनले बताए ।
ओलीको अहंकारवादी शैलीले आफूहरुले दुःख पाइरहेको नेपालको भनाइ छ । उनले भने, ‘केपी ओलीमा मै हुँ भन्ने अहंकार छ । पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ आफूलाई । त्यसैले हामी पीडित भएका हौँ ।’
ओलीको आचरणले उनलाई कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भन्न नसुहाउने नेपालको जिकिर छ । नेपालले भने, ‘उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण छैन । उहाँ कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट होइन । आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन ।’
प्रकाशित :पौष २९, २०७७ बुधवार - १६:१२:०२
मन्त्री ज्ञवाली भारतबाट रित्तो कुटुरो बोकेर फर्कनु भएछ : भट्टराई
भारत भ्रमण सकेर मन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फिर्ता, प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने प्रयास असफल
बालिका करणी अभियोगमा ५० वर्षीय व्यक्ति पक्राउ
एटिएमको बुथ फुटाउँदै गर्दा ३ जना पक्राउ
भन्सार छलेर ल्याएको मोबाइल बरामद
कांग्रेसको स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रर्दशन सम्पन्न, सबै वडामा प्रर्दशन गर्न आह्वान
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न ‘निर्वाचनदेखि किन डराएको ?’
नायिका एलिजा गौतमले ७७ वटै जिल्लाका दुर्गम गाउँमा १०-१० वटा घर बनाइदिने
राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन
तीन सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुँदै, कहाँ-कहाँ बन्दै छ ?
विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनः युरोपमा पुग्यो कर्णालीको अदुवा
नेकपा विवाद : महासचिव पौडेलको पद खोसियो
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा काठमाडौंमा बालकको मृत्यु